Izinkambu zeBrihuega Lavender | Izindaba Zokuhamba
Izinkambu zeBrihuega Lavender
Maria | | Spain amadolobha, Ukuzilibazisa
Isikhathi eside, izinkambu ze-lavender zaseProvence beziyindawo yezivakashi ebaluleke kakhulu kubathandi bezokuvakasha zasemakhaya, ezemvelo nezithombe. Minyaka yonke baheha izinkulungwane zezivakashi zizofuna ukutshona kwelanga okuhle kakhulu okunsomi kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu emadolobhaneni amahle alesifunda.
Kepha iminyaka ayinasidingo sokuya eFrance ukuyojabulela izinkambu ze-lavender. ESpain siye salingisa omakhelwane bethu ngokutshalwa kwalesi sitshalo esimnandi esinamakha amnandi. Imizuzu engaphezudlwana kwengama-45 ukusuka eMadrid iBrihuega, idolobhana elihle lase-Alcarrian okuthi ngenyanga kaJulayi lingabonakala lifana nelinye idolobha eliseFrance Provence.
Ngesikhathi sasehlobo, umzuzu wokuqhakaza okuphezulu kwenzeka kumahektha acishe abe yinkulungwane amasimu e-lavender azungeze idolobha nesifunda salo, okunikeza indawo ehlukile yamathoni we-purplish noluhlaza okwesibhakabhaka enhliziyweni yeGuadalajara. IBrihuega akuyona iProvence kepha isiphenduke uphawu oluye lwaholela ngisho emkhosini wamasiko. Isimangaliso!
1 Ungafika kanjani eBrihuega?
2 Umsuka wezinkambu ze-lavender zaseBrihuega
3 Umkhosi we-Brihuega Lavender
4 Yini ongayibona eBrihuega?
Ungafika kanjani eBrihuega?
IBrihuega isengxenyeni esentshonalanga nesifundazwe saseGuadalajara, esisemthambekeni ophansi ukusuka ethafeni lase-Alcarreña kuye esigodini somfula iTajuña. Itholakala kumakhilomitha angama-33 ukusuka eGuadalajara, ama-90 ukusuka eMadrid namakhilomitha ayi-12 ukusuka kuHighway N-II. Ngaseningizimu-ntshonalanga yesifundazwe saseGuadalajara nasosebeni lwesobunxele lomfula iHenares, isifunda saseLa Alcarria sikhona, okuyinhlokodolobha yaso eminingi iBrihuega.
Umsuka wezinkambu ze-lavender zaseBrihuega
IBrihuega ibilokhu iyidolobha labalimi nabafuyi ababenomkhakha othile njengoba kwakuyikomkhulu leRoyal Cloth Factory, elalisebenza kwaze kwaba ngemuva kweMpi Yombango yaseSpain. Eminyakeni edlule, isimo somnotho saqala ukuntengantenga futhi abantu abaningi base-Alcarria bathutha bayofuna amathuba emisebenzi angcono.
Kungaleso sikhathi lapho umlimi wendawo ogama lakhe lingu-Andrés Corral enza uhambo oluya eFrench Provence lapho athola khona amasimu e-lavender namathuba awo. Ngenxa yezici zalesi sitshalo, waqonda ukuthi kuhle ukuthi kutshalwe eBrihuega futhi waqala uhambo lokulinywa kwakhe kanye nezihlobo zakhe nomthaki. Baphinde bakha isitshalo se-lavender essence distiller esikhiqiza u-10% womkhiqizo womhlaba futhi sithathwa njengesihlome kakhulu e-Europe.
Le phrojekthi idale imisebenzi eminingi esifundeni futhi yaholela ekuvuseleleni isifunda esasiqala ukungena kwezomnotho.
Umkhosi we-Brihuega Lavender
Okuqale njengomcimbi phakathi kwabangani sekuwumcimbi wokujabulela isipiliyoni esiyingqayizivele sokudla nomculo esimweni esingenakuqhathaniswa. Ibungazwa ekuqaleni kokuvunwa kwe-lavender futhi ihlala izinsuku ezimbili. UMkhandlu Wedolobha laseBrihuega uhlela izinkambo eziqondiswayo okubandakanya ukuthuthwa kwamabhasi kusuka epaki ledolobha iMaría Cristina, njalo ngempelasonto ngoJulayi.
Lapho nje uMkhosi we-Lavender usuphelile, kuqoqwa izigidi zezimbali bese zidluliswa kumastandi, kukhishwe ingqikithi yazo futhi zibe yingxenye yamakha nezinto ezisemqoka kakhulu emakethe.
Yini ongayibona eBrihuega?
IBrihuega isesigodini somfula iTajuña lapho ubuluhlaza basethafa bukutholele khona isidlaliso seJardín de la Alcarria ngenxa yezingadi zayo ezicebile nezingadi ezinhle. Idolobha elibiyelwe ngodonga iBrihuega limenyezelwe njengeNdawo Yomlando-Nobuciko ngenxa yamagugu alo amasiko.
Udonga lwawo lwangekhulu le-XNUMX namakhulu eminyaka adlule izindonga zawo zawuvikela ngokuphelele lo muzi. Indawo ebiyelwe kuyo manje inkulu, icishe ibe ngamakhilomitha amabili ubude. Iminyango yayo, eyeNkantolo yeBhola, eyeChain noma iArch of Cozagón, ivulela izimfihlo zayo nomlando wedolobha.
ICastillo de la Piedra Bermeja itholakala eningizimu yedolobha. Ngaphezulu kwenqaba yokuqala yamaSulumane, kwengezwa amakamelo anezitayela zamaRoma ngekhulu le-XNUMX kwathi kamuva kwakhiwa isonto lesikhashana lesitayela samaGothic.
Izikhumbuzo zalo zenkolo zisifaka emininingwaneni yeRomanesque engasekho kanye nokuhlukaniswa kwamaGothic ohambweni lwayo lonke: ISanta María de la Peña, iSan Miguel noma iSan Felipe iyakufanekisa. Izinsalela zaseSan Simón ziyigugu leMudejar elalifihlwe ngemuva kwezakhiwo eziningi.
Phakathi kwezakhiwo zomphakathi kukhona ihholo ledolobha kanye nejele, izindlu zama-Renaissance ezifana nezaseGómez nezinye ezisendaweni ezintsha naseSan Juan. Kepha ngaphandle kokungabaza isikhumbuzo somphakathi esenziwe kahle yiReal Fabrica de Paños, isikhungo semisebenzi yezimboni zaseBrihuega futhi izingadi zayo ezisukela ku-1810 zihlonipha isidlaliso saleli dolobha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Izinkambu zeBrihuega Lavender
Yini ongayibona eBali
I-Aragonese Pyrenees, izimangaliso zemvelo nomlando omningi